Libya: Lasa malaza fatratra ny “mihomehy” Zenga Zenga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2011 4:40 GMT
Efa manakaiky ny 3 tapitrisa ny mpijery nahitana lahatsary natambatambatra nahenoana ilay kabarin'i Gaddafi mahatsiravina misy ny hoe “Zenga Zenga” raha mbola tsy ampy roa herinandro ny nametrahana azy tao amin'ny Youtube. Ao amin'ity fampanantenan’ “Ny Rahalahy Guide Mpitarika” ity no nampanantenany “hanadio an'i Libya isaky ny santimetatra, isan-trano, isan'efitrano, isaky ny arabe (Zenga Zenga)” (napetrak'i noyalooshemusic):
Noho ny antony maro samihafa dia misy ny dika hafa amin'io rakitsary io ihany saingy tsy misy mpandihy azonao alaina eto.
Araka ny vohikala Know Your Meme ,dia nanomboka nalaza ny fisamboran-teny Zenga Zenga rehefa nampiditra fangaron-kira avy amin'ny kabarin'i Gaddafi nanasongadina ilay notsongaina ny mpanao gazety Isiraeliana iray.
Heverina ho niteraka meme [“mihomehy”] tao amin'ny vohikalam-pizara-dahatsary Youtube ny lahatsary. Mitovitovy amin'izany kokoa dia nihanisongadina, natao hampihomehy ny mpijery kokoa, ny kabary namboarina avy amin'ny mpitondra Libyana. Eto moa dia manao hiran'olon-droa miaraka amin'i Shakira i Gaddafi (lahatsary nampidirin'i camelsmaycry):
Indro koa mbola misy fangaron-teny naverimberina hafa avy amin'ny sombin-teny ahenoana ny kabary “Zenga Zenga” ihany, navoakan'i ZZFO (mihoatra ny 1 tapitrisa ny efa nijery azy):
Mitondra ny lohateny hoe: “Muammar Gaddafi: Niteny izao ve ianao, mety ho tsaratsara kokoa ho anao ” ity lahatsary navoakan'i ml4482 ity:
Ary eto ny rap-n'ny Kolonely (nampidirin'i LinoVenturaa3):
Ary eto “Ny Rahalahy Guide” amin'ny fiverenan-kiran'ny “Singing in the Rain” na mihira avy orana. Lahatsary nampidirin'i EFFERLECEBE:
Farany, miendrika Looney Tune manasongadina an'i Ga-daffy (nampidirin'i